Goobaha Khadka Tooska ah ee Isbaanishka - Xeerarka Koodhadhka Khadka Tooska ah ee Khadka
(255 votes, celcelis ahaan, 5.00 out of 5)
Loading ... Isbaanishku waa mid ka mid ah quruumaha ugu khamaarka badan adduunka, hase yeeshee 1812 bakhtiyaanasiibkii ugu horreeyay ayaa halkan lagu abaabulay. 1977, dowladda Isbaanishka waxay go'aansatay sharciyeynta qaanuunka. Marka hore, waxay khuseysaa oo keliya khamaarka, oo ku saleysan xirfado, 1981-na waxaa la sharciyeeyay mashiinno naadi iyo madadaalo kale oo la mid ah. Horraantii 80-meeyadii in ka badan tobaneeyo hawlwadeenno ayaa helay ruqsad ay ku furaan casino ku yaal Spain. Xusuusin booqdayaasha galka khamaarka ee internetka in maanta warshadaha khamaarka Isbaanishku ay kobcayaan. Wadanku wuxuu leeyahay in kabadan 60 casinos iyo kudhowaad rubuc malyan ah mashiinada ciyaarta.
Sanadkii 2012 wuxuu dhaqan galay isbeddelada cusub ee sharci dejinta, oo ay ku jiraan sharciyeynta hawlwadeennada kaararka qadka ka shaqeeya, iyo sidoo kale sameynta ganaaxyo lagu abaabulo khamaarka sharci darrada ah. Maamulaha warshadaha khamaarka ee dalka waa Xafiiska Dhexe ee xakamaynta khamaarka (Dirección General de Ordenación del Juego). Hawlaha ugu muhiimsan ee xafiisku waa bixinta rukhsadaha, xakamaynta hawlgalka goobaha khamaarka, iyo sidoo kale ganaax lacageed haddii ay dhacdo falal sharci darro ah.
Khamaarista online ee Spain
Muddo dheer, ma jirin sharciyo gaar ah oo xakameynaya dhaqdhaqaaqyada goobaha khamaarka internetka ee Spain. Si kastaba ha noqotee, laga soo bilaabo 2002, dawladda Isbaanishku waxay bilowday inay u dhaqaaqdo jihada sharciyeynta iyo sharciyeynta bogagga internetka ee khadka tooska ah. Tani waxay horseeday ansaxinta sharciga ku habboon khamaarka khadka tooska ah ee Spain, oo ugu dambeyntii aasaasay aasaaska shatiyeyaasha shaqeeya.
Sharciga ayaa dhaqan galay Juun 2012, ilaa iyo markaasna in ka badan 70 ka shaqeeya khamaarka ayaa shati la siiyay. Si kastaba ha noqotee, sharciyo adag iyo 25% canshuur ayaa ka tagay hawl wadeeno badan oo aan ku jirin ganacsiga, si kastaba ha noqotee, suuqa khamaarka internetka ee waddanka ayaa kor u kacaya. Ilaa dhowaan, mashiinnada khadka tooska ah ee internetka ayaa laga mamnuucay Spain. Laakiin sharci-dajiyayaashu waxay go'aansadeen inay beddelaan, dhammaadka Julaay 2014 Online-ka ayaa helay nalka cagaaran.
Liiska Saacadaha 10 Spanish Sites Online Casino
Boggaga internetka ee casino ayaa aqbalaya ciyaartoyda Spain
Eeg liiska boggaga internetka ee casino ee aqbalaya ciyaartoy ka socota Spain, oo bixiya ciyaaro tayo sare leh oo ammaan ah. Halkan waxaad ka heli doontaa madadaalo ballaadhan oo ka bilaabanta mashiinnada ciyaarta ilaa ciyaaraha khamaarka oo ka nool kuwa iibiya barnaamijyada caanka ah sida NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, iyo kuwo kale oo badan.
Waxa kale oo aad akhriyi kartaa dib u eegista boggaga internetka ee khadka casriga ah, si aad u ogaatid dallacaadyada ugu wanaagsan ee online, gunooyinka iyo fursadaha lacag bixinta ee laga heli karo ciyaartoyda Spai
Joogsiga xiga ee wadada CasinoToplists socotada - waa Spain qorrax leh iyo caasimadeeda cajiibka ah. Madrid waxay ku mashquulsan tahay kuna raaxeysaneysaa taariikhdeeda, qaabdhismeedka xarrago leh, dabeecad khasab ku ah nolosha. Taageerayaasha shucuurta dhalaalaya adrenaline waxay jeclaan doonaan hoolalka ciyaaraha, naadiyada iyo naadiyada dalka!
Soo koobida maqaalka:
Qaar ka mid ah taariikhda iyo juqraafi ee Spain;
Garoomada iyo Khamaarka:
Casinos dhulka ku salaysan ayaa loo oggol yahay iyo ganacsiga khamaarka sharci ahaan loo sharciyeeyay;
Dhimashada casino waa maalgashiga guuldareysta haddii khasaarihii ay ka badnaayeen, canshuurtu hoos u dhacdo.
Bandhigga ugu weyn ee dalka:
Casino de Madrid;
Gran Casino Aranjuez.
Dhismaha Ciida Las Vegas - dhismuhu waa 2022;
Shan ka mid ah indhaha Madrid oo leh cinwaanno;
Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Spain iyo dadka deggan.
Goobta Spain iyo asalka taariikheed ee kooban
Boqortooyada Isbaanishka - mid ka mid ah kuwa ugu quruxda badan, martigelinta iyo diiran Yurub.
Magaceeda gabay, oo si aan caadi ahayn ugu filan, waxay ka soo qaadatay luqadda Fayniyaanka, halkaas oo "i-punks" loogu tarjumay "Xeerarka hirarka (bakaylaha)."
Sida muuqata, kahor intaanay jirin wax badan oo xayawaan ah. Maanta, Isbaanish - waa dal ay ku faanaan rag iyo dumar qurux badan, oo hamigiisa nolosha, qoob ka ciyaarka, farshaxanka iyo tacabur u yaqaan adduunka oo dhan.
Caasimadda Spain, Madrid waa taariikhda lagu faani karo ee soo jirtay qarnigii tobnaad. Maanta, magaaladan weyn waxay hoy u tahay in ka badan saddex milyan oo qof, waa soojiidashada aamusnaanta ee xaafadihii hore iyo qasriyadaha boqortooyada oo ay weheliso mashquulka waddooyinka waaweyn ee mashquulka badan, dukaamo badan, makhaayado iyo naadiyo.
Casinos iyo Khamaarista Spain
Spain - waa dal aad u taxaddar la'aan, waxaa la rumeysan yahay in laga ciyaaro mid kasta ama ku dhowaadba. Isbaanishku waxay jecel yihiin bakhtiyaa-nasiibka, ciyaaraha kaararka, sharadka iyo dabcan casino. Sanadkii 2013 ciyaarta waxaa ku baxday in ka badan 10 bilyan oo euro. Xaaladdan oo kale, celcelis ahaan muwaadin u dhashay waddanka wuxuu ku bixiyaa baashaal noocan oo kale ah qiyaastii 480 euro sanadkii, taas oo aad uga sarreysa dalalka kale.
Ganacsiga khamaarka ee Spain ayaa sharciyeeyay. Waxaa jiray waqtiyo markii xuquuqda iyo fursadaha ciyaartoyda iyo kuwa haysta khamaarka ay si aad ah u xad gudbeen, laakiin maanta si sharci ah ayaa loo qabtay. Sannadkii 2011, waxaa loo fuliyay sharciyeyn iyadoo la raacayo xeerarka Midowga Yurub. Isla mar ahaantaana waxaa jira dhowr xayiraad, tusaale ahaan, casinos-ka ayaa laga yaabaa inuu ka shaqeeyo oo keliya magaalooyinka waaweyn, gaar ahaan ka baxsan xadka magaalada. Da'da martida - laga bilaabo 18 sano. Xarumaha ciyaaraha waa inay ku yaalliin masaafo gaar ah oo midba midka kale ka fog.
sharci aan horay loo arag sida ku cad khasaaruhu wuxuu u dhigmaa khamaarka maalgashi dhicisoobay ayaa la qaatay 2013. Dhamaadka sanadka, haddii khasaaruhu ka bato xaddiga guusha, waxay yareynaysaa bixinta canshuuraha. Laakiin cashuurta dakhliga waa inaad ku bixisaa lagama maarmaan.
Dabcan, ciyaarta noloshu waxay ku urursan tahay bartamaha caasimadda. Madrid waxay si sax ah ugu faantaa seddexda casinos ee ugu weyn uguna quruxda badan dalka iyo xitaa Yurub.
Casriga ugu da'da weyn uguna casrisan caasimadda Spain - Casino de Madrid. Dhismaha shanta dabaq leh oo leh barxad saqafka ah wuxuu ku yaalaa Alcalá Street, 15. Sanadkii 1836, xaruntu waxay u furtay naadi maalqabeenno sharaf leh oo doonayay inay khamaaraan si ay waqtigooda u lumiyaan. Dhismuhu waa tijaabada ugu wanaagsan ee Belle Époque, gudaha waxaa sidoo kale lagu xafiday qaabkiisii ​​asalka ahaa: marmar cad, qurxin, rooga raaxada, daahyada iyo marada miiska.
Casino de Madrid waxay abuurtay 12 qol oo waaweyn, oo si fiican ugu qalabaysan khamaar kasta. Waxyaabaha kale, booqdayaashu waxay ku qanacsan yihiin sawirrada asalka ah ee farshaxanno caan ah, farshaxanno iyo waxyaabo qadiim ah. Waxaa ku yaal barkadda dabaasha iyo naadi isboorti, sauna, iyo maqaayado dhowr ah, iyo weliba qol akhris. Makhaayadu aad ayey qaali u tahay, laakiin waa u qalantaa. Waxay ahayd halkan 2011, waxay dhaaftay EPT-kii ugu dambeeyay - Booqashadda Turubka Yurub, oo badanaa lagu qabto Monte Carlo. Turubku waa mid caan ka ah Spain; hel oo kaqeybgal tartanka turubka (yar ama weyn) intaad dalka joogto waa mid aad u fudud.
Khamaarka ugu weyn waxaa loo tixgeliyaa Isbaanishka Gran Madrid, wuxuu ku yaal 29 kiiloomitir waqooyiga caasimadda. Makhaayada la furay 1981, aaggeedu wuxuu gaarayaa 8000 mitir murabac ah, ma jiro wax nasasho ah oo ka badan 200 mashiinno boolal ah iyo meelo kala duwan
Dhismaha saddexda dabaq ah, oo ay ku taal khamaarkan ayaa ka mid ah kuwa ugu waaweyn uguna quruxda badan Yurub, waxaa si joogto ah looga saaraa xayeysiisyada iyo bandhigyada. Naqshadeynta waxaa lagu fuliyaa qaabka guridda 50s. Xilliga jiilaalka ragga labiska dharka - ku habboon iyo xirmooyinka. Waa wax xiiso leh in la booqdo makhaayadda ugu yaraan qayb ka mid ah dalxiiska, aad u qurux badan dhammaantoodna la qurxiyey.
Dhinaca koonfureed ee bartamaha Madrid, kaliya 35 kiiloomitir bannaanka magaalada waxaa ku yaal halyeeyo kale oo loo yaqaan 'Casino' - Gran Casino Aranjuez. Waxay furan tahay maalin kasta, oo martida siisa maahan oo kaliya khamaar kala duwan, laakiin sidoo kale fursad ay ugu raaxaystaan ​​suxuunta macaan ee makhaayada, ku raaxeeysashada diskooga ama ku biir bandhigga quruxda badan ee flamenco show.
Euro Vegas ee 2022
Kasiinooyinka caasimada kaliya maahan guryaha khamaarka caanka ah ee kuyaala goob kasta oo dalxiis. Qorshe lagu dhammaystirayo dhismaha dhismaha ugu weyn ee Sand Las Vegas, sannadka 2022 in loo beddelo Euro-Vegas. Mashruucu wuxuu ka kooban yahay 12 isku-darka dhismooyinka madadaalada, taas oo marka lagu daro khamaarka ay ku jiri doonaan qolal leh 18 kun oo mashiinno boolal ah, qolalka shirarka ah, qolal hudheel ah, dukaamo, maqaaxiyo iyo xitaa tiyaatar.
Marka la dhammeeyo dhismaha Las Vegas Sand wuxuu noqon doonaa casino ugu weyn Yurub, culeyska maalinlaha ah waxaa loogu talagalay joogitaan raaxo leh oo ah 36 kun booqdayaal ah. Miisaanka aan horay loo arag ee Dunida Hore!
Spain oo ku taal khariidadda Europe
Museo del Prado. Cinwaanka: Paseo del Prado. Matxafka quruxda badan wuxuu ku yaalaa dhisme taariikhi ah, gudaha martida oo lagu sawirayo sawirro Spanish, Talyaani, Dutch iyo Flemish ah.
Duqa magaalada Plaza. Cinwaanka: Duqa Magaalada Plaza. Aaggan Madrid ee quruxda badan, oo ku qanacsan isuduwaha qaab dhismeedka raaxada leh.
Qasriga Boqortooyada. Cinwaanka: Calle Bailén. Qalcaddii Moorish ee qadiimiga ahayd hadda waxay noqotay deggenaanshaha rasmiga ah waxayna u furan tahay booqashooyinka. Qolalka waxaa lagu qurxiyaa rinjiyeyaasha xariifnimada ranjiyeynta.
Matxafka Queen Cofii. Cinwaanka: Calle de Santa Isabel, 52. Xaruntan farshaxanka waxay soo uruurisay shaqooyinkii ugu farxadda badnaa ee rinjiyeyaasha qarnigii labaatanaad.
Fagaaraha Cibeles. Cinwaanka: Plaza de la Cibeles. Aag aan caadi ahayn oo qurux badan ayaa soo jiita dareenka isha qarnigii XVIII oo leh taallo loo yaqaan 'Cybele' - ilaahadda bacriminta.
Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Spain iyo Spain
Isbaanishka, in ka badan waddamada kale ee Yurub, baararka, makhaayadaha iyo makhaayadaha. Guriga Trapeznichat halkan ku dhow lama aqbali karo.
Midabada calanka qaranka waxaa lagu xushay sharaftii dagaalka dibida: casaan - dhiig, jaalle - ciid.
Isbaanishka waxaa laga aqbalay in la guursado / la guursado 30 ka dib, caruurtuna waxay bilaabaan - 35-40 kadib.
Wadanku wuxuu guursaday guurka isku jinsiga ah.
Badanaa, magaca labadii lamaane ee Isbaanishka iyo hooyada.
Summer si ay u hoos dhacaan roobka ee Spain ku dhowaad aan macquul ahayn.
Waxay ku taala jasiiradda Iberian waxay soo saartay gitaarka, muusikada, joornaalka, sigaarka, dhejinta, mindida Navajo iyo roodhida.
Isbaanish - goobtii uu ku dhashay Chupa Chups, oo ah duub loogu talagalay nacnaca caanka ah ayaa iskiis isu hindisay Salvador Dali!
0.1 Khamaarista online ee Spain
0.2 Liiska Saacadaha 10 Spanish Sites Online Casino
1 Top 10 Best Europe Kasiinooyinka Online 2021:
2 Top 10 Best USA Kasiinooyinka Online 2021:
2.1 Boggaga internetka ee casino ayaa aqbalaya ciyaartoyda Spain
3 Khamaarista Spain
3.0.1 Goobta Spain iyo asalka taariikheed ee kooban
3.1 Casinos iyo Khamaarista Spain
3.1.0.1 Casino de Madrid
3.1.0.2 Gran Madrid
3.1.0.3 Gran Casino Aranjuez
3.1.0.4 Euro Vegas ee 2022
3.1.1 Spain oo ku taal khariidadda Europe
3.1.2 Soojiidashada Madrid
3.1.3 Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Spain iyo Spain
eurobet casino mobile